NgeSonto, Okthoba 30, 2005 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Isikhathi eside, imboni yesoftware yahlukaniswa phakathi kwesixuku seSoftware nesixhumi Somhlinzeki Wensiza Yohlelo Lokusebenza. Isoftware iyalayisha futhi isebenza endaweni yakhona kwi-PC / MAC yakho. I-ASP yisoftware esebenza kuseva futhi uxhumana ngesiphequluli. Inzuzo ye-ASP ukuthi ingakhipha ukulungiswa nezici ezintsha ngaphandle kokuthi ufake noma yini endaweni. Okubi kakhulu ukuthi isoftware esuselwe esipheqululini ibilinganiselwe kakhulu ngenxa yokuhlelwa kohlelo lwamakhasimende nokulinganiselwa kwesiphequluli.
Ezinye izibonelo ezinhle: Bheka umsebenzi wokuhudula bese uphonsa kulokhu isayithi.
Uyayithanda i-MS Word? Kunabahleli abangahle ngaphandle lapho kuwebhu. Nayi eyodwa.
Ngeke kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuthi abahlinzeki bezinsiza zokusebenza baqale ukuthatha izintambo. Ngingalubona ngamehlo engqondo usuku lapho uqasha iMicrosoft Office ngo- $ 9.95 ngenyanga kunokukhokha amakhulu ambalwa kwilayisense ngayinye.
Yini iBailiwick yakho?
Dec 16, 2007 ku-2: 20 AM
@Douglas: "I-PHP ne-VBScript yizibonelo zezilimi eziseceleni kweseva."
Lokho empeleni akunjalo ngokusemthethweni iqiniso nge-VBScript. Okungaba yiqiniso ngokwengeziwe kungaba ukuthi “I-VBScript iyisibonelo solimi lokubhala olusetshenziswe kakhulu ohlangothini lweseva njengolimi oluyinhloko lwe-Microsoft ASP noma ngabe ingasetshenziswa njengolimi lokubhala ohlangothini lwamakhasimende ku-Internet Explorer ye-Microsoft."
Yebo, ingumlomo futhi bengingayichaza ngamazwi, kepha uma unikezwe umongo, kungani uye emzameni? 🙂